संगीता रेग्मी, नेपाल ऐतिहासिक र संवैधानिक रूपमा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । लामो समयसम्मको आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा भयो ।
त्यही संविधानको कार्यान्वयनको रूपमा लिन सकिन्छ भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई । तर, राज्यको सार्थक पुनर्संरचना र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अझै अप्ठ्यारो परिस्थिति मै छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सथप ग्रहण गराउने, प्रदेशको राजधानी तोक्ने, मुख्यमन्त्री चयन गर्ने, नयाँ सरकार गठन जस्ता विषयहरू तोकिएको समयमा नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका अन्य गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धनले ६ प्रदेशमा बहुमत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेस पछाडि पर्न ग¥यो भने प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम–राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । ६ वटा प्रदेशमा बाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने लगभग पक्का हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा मधेश केन्द्रित दलको सरकार निर्माण हुने देखिएको छ ।
सीमांकनमा असन्तुष्ट रहँदै लामो समयको आन्दोलनपछि निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा लिएर जनताको माझमा पुगेको राजपा–फोरम गठबन्धनले अनपेक्षित सिट जित्यो जसले गर्दा प्रदेश नम्बर २ मा उनीहरूको उपस्थिती बलियो रह्यो भने संविधान संशोधन हुनुपर्ने मधेश केन्द्रित दलको अडानलाई जनताले अनुमोदन गरे ।
राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा रोजगारको क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण देश नै आर्थिक रूपले समृद्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप गरीबी र विपन्नताको दुश्चक्रबाट मुलुकबाहिर निस्कन सकेको छैन ।
यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रदेश नं. २ मा परेको छ । विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर, पछिल्लो समय यस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धिस्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गरीबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई डोहो¥याउन नसक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा मधेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धिस्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ ।
तर, विकेन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व भएकाले राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली कायम रहेकाले पनि विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएका हुन् ।
यसका साथै राज्यबाट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा भएको विभेद तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि भएको ऐतिहासिक लामो मधेश आन्दोलनका कारण पनि यो प्रदेशमा गरीबी र बेरोजगारी दर बढाएको छ भने अर्को तिर अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाएर ऋणात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ ।
विविध सम्भावना भएर पनि प्रदेश नम्बर २ अहिलेको अवस्थामा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि पर्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो प्रदेशमा जनसंख्याको झन्डै आधा अर्थात ४८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
चुरे दोहनको कारण तराई–मधेशको उत्पादकत्व घट्दै जानु र कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु गरिबीको मुख्य कारण हो । दाईजो प्रथा व्याप्त हुनु, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुनु, बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा एकदमै पछाडि पर्नु, सुगम भएर पनि सडकको अवस्था जीर्ण हुनु, भारतसँगको खुल्ला सिमाका कारण लागुऔषधको कारोबार बढ्दै जानु जस्ता विविध कारणले गर्दा पनि दुई नम्बर प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
शिक्षामा कमजोर देखिएको यो प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ, उद्योग धन्दाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विकासको मुद्दालाई पछाडि पार्दै राजनीतिक मुद्दा मात्र अगाडि बढाएको हुनाले पनि २०६२/६३ सालदेखि सुरू भएको मधेश आन्दोलनले मधेशको विकासमा खासै भूमिका खेल्न सकेन ।
प्रदेशले जे प्राप्त गरेको छ र जे जस्ता स्रोत, साधनहरू उपलब्ध छन्, त्यसैका आधारमा समग्र विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता हो । पहिचान र अधिकारको मागसँगै चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मानव सूचकांक, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारीको सिर्जना लगायतका विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ ।
प्रदेशको समग्र विकासको लागि सबै तहतप्काबाट साझा संकल्प र गुरूयोजनाका आधारमा अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रदेश नम्बर दुईको विकासमा अब बन्ने स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रबाट पनि पहल हुन जरूरी देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ लाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति ल्याउन नसकेको खण्डमा अहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ प्रदेश नम्बर २ ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारकोे छ । तर, झण्डै एक चौथाइ जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको, पूर्वाधार विकास न्यून रहेको, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार सानो रहेको र त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि २ नं. प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य र एकता हुनै पर्छ । यस कार्यमा मुख्यतया राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले पनि मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सरकारले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)